Ayyaanna Irreechaa Arfaasaa Tulluu Beekii Irratti kabajame!
Date: May 5, 2012Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, Jimmaa, 5 Caamsaa 2012) Ayyaanni Irreechaa kan Arfaasaa Ebla 29, 2012 Godina Jimmaa, qarqara magaala Jimmaa, Tulluu Beekii irratti yeroo 4ffaa dhaaf sirna oo’adhaan kabajame.
Gabaasaan keenya Jimmaa irraa akka ibsetti, ayyaana kana irratti namoonni gara 10,000(kuma kudhan) olii ta’an kan irratti argaman yoo ta’u, sirna kana qindeessuu irratti barattoonni Yunivaristii Jimmaa fi Koollejjii Barsiisota Jimmaa dadammaqiinsa guddaa taasisaniiru.
Namoonni Ayyaana kana irratti argaman barattoota dabalatee jiraattonni naannoo fi hojjattonni mootummmaa hedduun irratti hirmaatanii akka jirn illee beekamee jira.
Ayyaanni Irreechaa Arfaasaa sirna hoo’aadhaan kabajame kun sirna Irreechaa kan Arfaasaa hanga ammaatti deebi’ee kabajamaa jiru keessaa haamilee uummataa fi baay’ina namoota hirmaataniin Oromiyaa keessatti kan jalqabaa akka ta’e illee kanneen ijaan argan tilmaamanii jiru.
Ayyaanni kun ganama sa’aatii 7:00(AM) jalqabee hanga 11:00(AM)tti kan kabajame yoo ta’u, sirna eebbaa angafaa-quxusuudhaan gaggeeffame dabalatee Waaqeffannaa ilaalchisee sagantaan walirraa baruutis gaggeeffameera.
Sirni akka sirnaa fi amantii Oromootti Faaruu Waaqaatiin kabajamaa oole kun, akkuma aadaa Oromootti sirboota aadaa Oromootiin dabaalamee haala miidhagaadhan xumuramuun illee hubatamee jira.
Haata’uutii, sirni akkas guddaa ta’e kun gurra ummataa akka hin geenyeef dhiibbaan karaa addaaddaa akka ture odeessi keenya ni mirkaneessa. “Ayyaana guddaa kana himuu kan lagatan, otuu kan saba warra aangoo qabuu ta’ee, waanuma xiqqoodhaan gurra nu duuchu ture. Garuu, kan Oromoo guddatus, miidhagus, akka sagaleen hin dhagayamne godhama,” kan jedhe Boonaa Milkii, “dhiibbaa fi roorroo kamuu qabsoon keessaa baana,” jedhee jira.
Itti dabaluunis, “sagaleen keenya akka ummata keenya bira gahuuf sabaa-himaawwan akka VOA fi kan birootti nuuf dhaama; yeroo fedhan namoota sirna kana qindeessan haasofsiisuun waan isaa beekuu fi beeksisuu danda’u,” jechuun dhaamsa isaa dabarfatee jira.
Akkuma beekamu sirni ayyaana Irreechaa kan kabajamu waggaatti yeroo lama; Birrraa fi Arfaasaa dha. Irreechi Birraa Oromiyaa fi biyya alaa iddoo baayyetti sirritti babal’atee kabajamaa jira. Ayyaanni Irreechaa kan Arfaasaas waggootii dhiyoo as iddoo tokko tokkotti deebi’ee kabajamuu jalqabeera.
Previous Previous post: Hawaasti Oromoo Guyyaa Gootota Oromoo kabajatan WBOf Gumaata Kennan
Next Next post: Guyyaan Gootota Oromoo Mallattoo Oromummaa ti!